Umuntu ngamunye ekuphileni kwakho kungaphansi ezifweni ezihlukahlukene, ezinye saphiliswa futhi abanye babe ezingamahlalakhona. Kodwa kukhona izifo ngempela sethusa futhi njalo isikhathi sethu - umdlavuza. Lezi zifo kwenzeke umuntu ngamunye eyedwa. Kodwa abaningi yohlobo lwazo izimpawu zingasekho ezaziyovivinya okuyokhulunywa emzimbeni ukubukeka umdlavuza. The main futhi ezibalulekile uphawu, okuyinto akuvamile nakani, ikakhulukazi abesifazane - kuyinto umkhuhlane njalo. Ngenxa yalokho lesi sifo iqala ukuba bathuthuke, ukwelashwa kungase kungabi ngempumelelo.
Ngasiphi yobudala ungathola umdlavuza?
Kuyadingeka ngasiphi yobudala ukuze kuqashwe impilo yabo. Uma une ngokuzumayo kwesisindo, uzoshesha niphele uzizwa ubuthakathaka njalo, kumane nje kudingeka ukuba aye kudokotela, ngokuqinisekile lokhu akusho ukuthi une umdlavuza kuba. Kodwa ukuhlolisisa ngokucophelela umzimba kuyadingeka. Lokhu kuhlola kungenziwa ngesikhathi Research Institute of Oncology (saseTomsk). Ochwepheshe we Research Institute babe olutheni ukusebenza iziguli ezinalesi sifo. Abazincomayo bonke abesifazane ulandele uhlelo zokuzala nomdlavuza wamabele. Ngokwezibalo, isimila esibulalayo e abesifazane kungase kuvele ku esifubeni.
Izimpawu izifo esingokwemvelo oncological
Kwenzeka ukuthi odokotela abazange ngokushesha baqonde ukuthi isiguli umdlavuza, ngaleso sikhatsi bafundza bacala ukulapha noma isiphi isifo, kodwa kwanhlanga zimuka nomoya. Njengoba sekushiwo, eziningi izimpawu - ukukhathala, ukwehla kwesisindo somzimba esikhathini esifushane - Ungase futhi ibonisa ukuthi isifo. Ngezelela noma uphawu ingxenye yomzimba noma igatsha yangaphakathi, ezihlukahlukene zokubona. Kungaphindze kube netikhatsi imfiva njalo, ukubukela-lymph, bangase ukwandisa. Futhi Institute of Oncology Ochwepheshe (saseTomsk), isizathu esiyinhloko libizwa Sokuzivikela okungazelele kongoti. Ngaphezu main, kukhona eziningi izimpawu ezithile umuntu ngamunye ingakhishwa abathile. Ngokudabukisayo, ngenxa yalokhu yomdlavuza emhlabeni namuhla ungomunye lokufa eliphakeme.
Cancer Research Institute (saseTomsk) ku Savinih
Ucwaningo Scientific-Institute of Oncology edolobheni saseTomsk, esisogwini Savinykh emgwaqweni, indlu 12/1. Lokhu umtholampilo kungenziwa ngokuthi omunye the best in the Ekude naseSiberia. I ngokucacile eyinhloko Ochwepheshe - cwaningo kanye ikhambi umdlavuza, kanye nekusungulwa nekwetfulwa kweluhlelo impumelelo yezesayensi kulo mkhakha. Cancer Research Institute (saseTomsk) kuyinto uhla izindawo professional:
Ukutadisha ngokujulile umzimba womuntu, incazelo eyinhloko ebangela umdlavuza, ukwakha iqembu ephezulu.
Lolu cwaningo lwamaphethini futhi bahlele ukubukeka lokuvikela umdlavuza futhi ekuhlonzweni kwezifo.
Ukuthuthukiswa izindlela ezintsha futhi ephumelelayo aphathe abanomdlavuza nge sitho-art imishini nezinqubo.
Cancer Research Institute (saseTomsk) has a endaweni ngokwanele ezinkulu, ngakho kukhona laboratories yocwaningo eziningi izigceme nesineke. Umphumela inqwaba iziguli zingafundwa ngokushesha. Cancer Research Institute (saseTomsk) has a impendulo ngokwanele omuhle futhi hlobo evumela ukuthi umtholampilo ukuba inombolo eyodwa.
Izimpawu ze-umdlavuza wamathumbu. Indlela yokuvimbela uphethwe esabekayo
Ukwelashwa Cytokine - kuyini? Izibuyekezo yokuphathwa indlela yokwelapha Cytokine
Umdlavuza Isibindi: izimpawu zesifo nakho konke odinga ukukwazi ngalo
Indlela babhale indaba ekhuluma engavamile kwengqikithi ethi: "Autumn Usuku '?
Sizenza esemthethweni kokuyeka (for freelancers), yombuzo kanjani ukuthola SNILS kwaba aphansi ngawe. Qondisa esenzweni.
Indlela ukukhetha umshini Welding for amapayipi epulasitiki? Welding imishini ukuze amapayipi epulasitiki
Umbala zoster - Ukwelashwa Prevention and
Kuyini amber? amber ukuminyana
Indlela ukuhlwanyela utshani utshani: ukulungiselela, ukukhethwa isiko kanye kudalwa utshani
AM3 (isokhethi): incazelo, izici ngokuqhathanisa